Akụkọ - Gini kpatara nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma ji sie ike imegharị?
Gini mere o jiri sie ike imeghari?
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ naanị 14% nke nkwakọ ngwaahịa plastik n'ụwa niile ka a na-emegharị-naanị 5% nke ihe ndị a na-ejigharị n'ihi mkpofu nke usoro nhazi na imegharị. Ighaghachi ihe nkwakọ ngwaahịa mara mma na-esikarị ike. Wingstrand na-akọwa, sị: “E ji ihe agwakọta mee ọtụtụ nkwakọ ngwaahịa, ya mere o siri ike imegharị ihe.” Isi mgbapụta bụ otu n'ime ihe atụ ndị a na-ahụkarị, nke a na-ejikarị isi iyi plastik na aluminom. Somefọdụ nchịkọta pere mpe iji wepụta ihe bara uru. ”
Arnaud Meysselle, onye isi oche REN Clean Skincare kwuru na ụlọ ọrụ ndị mara mma nwere ihe isi ike ịchọta azịza kwesịrị ekwesị n'ihi na ụlọ ọrụ imegharị ihe dịgasị iche iche gburugburu ụwa. "N'ụzọ dị mwute, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enwere ike ịmegharị nkwakọ ngwaahịa ahụ n'ụzọ zuru ezu, nke kachasị mma ọ ga-abụ na a ga-emegharị ya na 50%," ka o kwuru na N'ajụjụ ọnụ ọnụ anyị na London. Yabụ, akara elekere ahụ agbanweela na nkwakọ ngwaahịa a na-emegharị emegharị na ngwugwu plastic. “Ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụghị iji mee nwa agbọghọ na-amaghị nwoke.”
Mgbe o kwusịrị nke ahụ, REN Clean Skincare ghọrọ akara nlekọta anụ ahụ izizi iji tinye Infinity Recycling teknụzụ na mbinye aka ngwaahịa Evercalm Global Protection Day Cream, nke pụtara na a ga-emegharị nkwakọ ngwaahịa ahụ ugboro ugboro site na kpo oku na ịpị. "Plastic a nwere ihe eji emegharị 95%, yana nkọwa ya na njirimara ya adịghị iche na plastik na-amaghị nwoke," kọwara Meysselle. Isi ihe dị na ya bụ na ọ nwere ike imegharị ya ruo mgbe ebighị ebi. ” Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ịmegharị ọtụtụ plastik naanị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ.
N'ezie, teknụzụ dịka "Infinity Recycling" ka chọrọ nchịkọta ka ịbanye ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị iji megharịa ya n'ezie. Dị ndị dị ka nke Kiehl na-ebute ụzọ n'ịchịkọta nkwakọ ngwaahịa site na mmemme imegharị ihe n'ụlọ ahịa. "N'ihi nkwado nke ndị ahịa anyị, anyị emegharịala ngwungwu ngwaahịa 11,2 nde gburugburu ụwa kemgbe 2009. Anyị na-agba mbọ imegharị ngwugwu nde 11 ọzọ ka ọ na-erule 2025," onye isi ụlọ ọrụ Kiehl Leonardo Chavez dere na email site na New York.
Obere mgbanwe na ndụ nwekwara ike inye aka dozie nsogbu imegharị ihe, dị ka ịtọlite ​​mkpofu ahịhịa n'ime ime ụlọ ịwụ. Meysselle kwuru, "Ọtụtụ mgbe, enwere naanị otu ahịhịa na ime ụlọ ịsa ahụ, yabụ onye ọ bụla na-etinye ahịhịa niile." "Anyị chere na ọ dị mkpa ịgba mmadụ niile ume imegharị ụlọ ịsa ahụ."
Ngosiputa Ngwa Powder with Sifter, Ihe Ude Ngosiputa Ngwa, Cream Ololo Ngosiputa Ngwa, Creamchọ mma ude ite, Black karama jel Polish, Anya ude ite,